CH4 (methane) + Cl2 (chlorine) = CH3Cl (methyl chloride) + HCl (hydrogen chloride) | Balanced Chemical Reaction Equation
CH4 Cl2 = CH3Cl HCl | Isu dheellitirka Kiimikada
koloriin = hydrogen chloride
methane koloriin chloride methyl koloriin koloriin
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta CH4 + Cl2 . CH3Cl + Hcl
Waa maxay xaaladda falcelinta ee CH4 (methane) ee uu la falgalo Cl2 (chlorine)?
Xaaladda Kale: iftiin faafay
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa CH3Cl (methyl chloride) iyo HCl (hydrogen chloride)?
Cl wuxuu la falgalaa methane
Dhacdada ka dib CH4 (methane) waxay la falgashaa Cl2 (chlorine)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada CH4 + Cl2 . CH3Cl + Hcl
Su'aalaha la xidhiidha alaabta CH3Cl (methyl chloride)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CH3Cl (chlorine)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CH3Cl (methyl chloride) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee HCl (chlorine)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh HCl (hydrogen chloride) alaab ahaan?
(kh) (kh) (kh) (lng)
(xoog leh) (waa) (xoog leh) (xoog leh)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga Hcl (hydrogen chloride), oo soo muuqanaya dhamaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda Cl2 (koloriin), la waayay
Soo qaado weelka gaaska methane iyo koloriin si ay u iftiimiyaan, xoogaa ka dib, biyo ku shub dhalada, si tartiib ah u rux, ka dibna ku dar xabbad litmus ah
Methane waxay ku falcelisaa koloriin marka iftiin jiro. Chlorine wuxuu badali karaa atom kasta oo H ah oo kujira maadada methane.